Amanqaku kaTravis Smith Martech Zone |
Amanqaku ngu Travis Smith
Iqela leTuitive lisazama ukuhlala phantsi emva kwenkomfa yalo Mzantsi weSouth West Interactive (SXSWi) kulo Matshi. Sonke saba nexesha elimnandi kwaye safunda okuninzi malunga noluntu olunxibelelanayo kunye noko kuzayo. Kwakukho iiseshoni ezininzi ezinomdla ezivela kwiqela lenjongo kunye neqela le-Gmail ukuya ekuphekeni iiNerds, uninzi lwazo oluye lwavela kwi-Intanethi. Ndifuna ukwabelana ngenye yam yam intandokazi.
Umzobi kunye nomzobi uNick Dewar usweleke kule veki. Usebenze kwiinkampani ezininzi ezahlukeneyo ukusuka kwiNyanga yeAtlantic ukuya kwiNdlu eNgahleliwe, ebonelela ngemifanekiso enengqiqo kumagama anomdla kwinqaku okanye encwadini. Umsebenzi endiwuthandayo uNick Dewar ubonakalisa zombini ifilosofi yam yobungcali kunye neyam: Ukwenza lula sisitshixo sokuphila ngempumelelo. Olu luphawu lobuchwephesha kunye nokuchaneka ukuphindaphinda indlela yovavanyo yexesha le-KISS: Hayi, ayikuko ukuba i-KISS-Umgaqo we-KISS
Kumnxeba osandula ukwenziwa kwinkampani enkulu yomnxeba, endingazukuyikhankanya (ilogo yabo ijongeka njengenkwenkwezi yokufa okuluhlaza okwesibhakabhaka), ndathabatheka ngummeli wenkonzo yam yabathengi? eyothusayo, ndiyazi. Kuwo wonke umnxeba wadwelisa le nto ndiyifunayo, kwaye wathi izinto ezinje, "esi sisivumelwano esithandwa kakhulu ngabathengi bam", kwaye "mandithethe nomphathi ukuze asenzele isivumelwano esingcono", kwaye "ndiyaqonda ukudana,
Ukuba uyingcali kwishishini lakho, uyazi ngaphezu kwakhe nabani na malunga nento oyenzayo kunye neenkcukacha zemveliso yakho. Imveliso yakho, ngendlela, inokuba yinkonzo, iwebhusayithi, okanye into ebambekayo. Nokuba yeyiphi imveliso yakho, unokububona ubuchule bakho kunye nengqondi kuyo yonke indawo. Ingxaki yile? abathengi bakho abanakho. Abathengi kufuneka bagqibe umsebenzi ngemveliso yakho ukuze